Fitsapana hafa indray mitete an'ny Galaxy S6 Edge | Androidsis
Fitsapana hafa indray mitete an'ny Galaxy S6 Edge
Nanjary mpankafy ny fitsapana fanoherana ny terminal izahay, na toa izany miaraka amin'ireo lahatsoratra marobe nosoratanay momba izany. Ny lesoka amin'izany dia ny Galaxy S6 Edge sy ireo mpampiasa mandray ny smartphone amin'ny fetrany amin'ireo fitsapana fitetezana ireo.
Nahita fitsapana fitetezana samy hafa an'ny Galaxy S6 Edge izahay, toy ny, fitsapana rano na nahita ny fomba nanosika ny vehivavy hamerina ny fitaovana hatrany amin'ny tany tsy hatahotra ny ho vaky. Androany dia manohy an'io tsipika fitsapana fanoherana io izahay, ary asehonay anao ny fitsapana farany fitetezana an'ity terminal Korea Atsimo ity.
Tsy vitan'ny hoe nahita fitsapana mitete an'ny terminal Samsung izahay fa efa hitantsika koa ny fomba nanesoran'ny orinasa sinoa ny tratrany tamin'ireo fitsapana notanterahin'izy ireo tamin'ny fitaovany tamina famokarana feno, toa an'i Oppo. Nandritra ny fitsapana rehetra nilatsaka tamin'ny Galaxy S6 Edge dia hitantsika ny fivoahan'ny terminal tsara hatrany amin'ny riandrano, saingy na izany aza amin'ity horonantsary farany ity dia ny mifanohitra amin'izay no mitranga.
Ao amin'ny horonantsary izay nanamavo ny Galaxy S6 Edge tamin'ny tany hatrany hatrany ilay vehivavyHitanay ny fomba niasan'ny finday tamim-pahanginana ary zara raha nisy gorodona na triatra fitaratra miaro ny efijery amin'ilay fitaovana.
Saingy tamin'ny horonantsary farany natao dia hitantsika ny fijalian'ilay fitaovana rehefa lavo avy any aoriana izy io noho ny teo aloha. Ny fitsapana fitetezana notontosaina dia nahitana tulo telo, ny iray avy amin'ny sisiny, ny iray avy any aoriana ary ny farany avy eo aloha. Tamin'ny fararano voalohany, tsy dia nisy fiatoana kely akory ny terminal, dia ny tsivalana tsindraindray ihany no hitanay teo amin'ny sisin'ny S6 Edge. Ny fidinana faharoa dia ny toerana iaretan'ny terminal indrindra, ny fianjerana dia vita amin'ny lamosina ary vaky nefa tsy mitohy. Farany tamin'ny fitsapana farany ary rehefa nianjera dia miasa tsara ny S6 Edge fa simba na aiza na aiza ny terminal.
Araka ny hitanao tamin'ny horonantsary etsy ambony, ny S6 Edge dia terminal miorina tsara sy mahatohitra tsara, fa toy ny an'ny finday rehetra, mety hitera-doza izy io. Ka raha mividy iray ianao dia tsara kokoa hatrany ny mampiasa tranga iray manohitra ny fikorontanana mafy na dia manimba ny endrika mampiavaka azy aza izany na mitandrema rehefa mampiasa ny terminal mba hisorohana ny fianjerana manaraka ary tsy ho sosotra rehefa esorinao hiala amin'ny tany ilay terminal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Fitsapana hafa indray mitete an'ny Galaxy S6 Edge
Ezekiela Avila dia hoy izy:
Izahay dia efa nanomboka nivarotra setroka ary tamin'ny marketing izay mivadika ho plagiarisme avy eo?
Valiny tamin'i Ezequiel Avila
na inona na inona lazain'izy ireo momba ny fitaratra dia vera izany ary vaky
Chrome for Android dia hanana fitetezana efijery feno
Taichi Panda, mpikaroka tranomaizina mahafinaritra miaraka amin'ny multiplayer sy PVP avy amin'ny SnailGames manam-pahaizana